बाँकेमा क्वारेन्टाइनमा नराखी घर लग्ने क्रम जारी - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	बाँकेमा क्वारेन्टाइनमा नराखी घर लग्ने क्रम जारी - Khabar24Nepal
महेन्द्र सिंह पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
असार १९, बाँके । भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई नाकामा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइनमा पठाउने नीति रहेको छ । कतिपयले भने होल्डिङ सेन्टर र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाटै ‘पावर’ देखाएर सिधैं घर लैजाने गरेका छन् ।
पावर देखाएर क्वारेन्टाइनमा नबसाई घर लैजानेमा जनप्रतिनिधि बढी छन् । ‘होम क्वारेन्टाइनमा राख्छौं भनेर लैजान्छन्, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस स्रोतले भन्यो, पावर देखाउँछन् । कतिपयले होम क्वारेन्टाइनमा राख्छौ भनेर कसम खान्छन् ।’ चिनेजानेका व्यक्ति आउँदा सुरक्षाकर्मी पनि लचिलो भएको पाइएको छ । शुक्रबार क्याम्पसमा ५८ जना छन् । बिहीबार नै ४१ जना थपिएका हुन् । बिहीबार विहानसम्म १७ जना क्याम्पस र चार जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् भनिएको थियो । पावर लगाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर लगिएका व्यक्ति होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छ कि छैन कसले हेर्ने ? होम क्वारेन्टाइन त खाली क्वारेन्टाइनबाट घर लैजाने बहानामात्रै भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले होल्डिङ सेन्टरबाट लगेको भन्ने जानकारीमा आएकाले उसलाई क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो । प्रजिअ कुरुम्बाङले भन्नुभयो, क्वारेन्टाइनबाट कति जनालाई लगियो त्यसको खोजी गर्दैछौं । उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमै ल्याएर राख्छौं ।’ धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँका मान्छेलाई छुटाएर ल्याइरहदा त्यस्तो काम नगर्ने वडाध्यक्षलाई टोलवासीले थर्काइरहेको पाइएको छ । ‘सबैले छुटाएर ल्याउँछन्, तपाई किन छुटाउन जानु हुँदैन,’ वडावासीले भन्ने गरेका छन्, क्वारेन्टाइनमा प्रहरीले वडाध्यक्षलाई लिएर आऊ अनि छोडिदिन्छु भन्छन् । तपाई जानु प¥यो ।’
थबाङको छेर्लोबाङ झार्नैमा पहिरो ६ जना बेपत्ता २ घरगोठ बगायो लाखौको क्षेती !
शिक्षा बिकास निर्देशनालय प्रदेश नं. ५ बुटवल रुपन्देहीमा कार्यरत दुई कर्मचारी घुस रकम सहित पक्राउ